Ukunyamekelwa kwezithako zaBavelisi kunye nabaXhasi - China iZinto zoKhathalelo lobuNtu yeZithako zeZithako
Izithako zoKhathalelo lobuqu
IiKojic Acid kunye nezinye izinto
VP / VA iiCololymers
I-Poly (Methylvinylether / Maleic Acid) Iityiwa eziHlanganisiweyo
Ii-Acrylates / i-C10-30 i-Alkyl Acrylate Crosspolymer
IVinylpyrrolidone / IVinyl Acetate
I-DL -Panthenol Powder
I-DL-Panthenol sisichumisi esikhulu, esinomgubo omhlophe, unyibilikayo emanzini, utywala, ipropylene glycol. I-DL-Panthenol ikwabizwa ngokuba yiProvitamin B5, edlala indima ephambili kwimetabolism yomntu. Ukuphazamiseka okuninzi kwesikhumba. I-DL-Panthenol isetyenziswa phantse kuzo zonke iintlobo zamalungiselelo ezinto zokuthambisa. I-DL-Panthenol ikhathalela iinwele, ulusu kunye neenzipho. Esikhumbeni, i-DL-Panthenol yindawo enzulu yokungena ngaphakathi. I-DL-Panthenol inokukhuthaza ukukhula kwe-epithelium kwaye ine i ...
I-DL -Panthenol 50%
I-DL-Panthenol iipesenti ezingama-50 sesona sinyibilikisi sikhulu, sinombala omdaka ngombala otyheli omthubi obonakalayo, enyibilikayo emanzini, utywala, ipropylene glycol. I-DL-Panthenol ikwabizwa ngokuba yiProvitamin B5, edlala indima ephambili kwimetabolism yomntu. I-Vitamin B5 inokubangela ukuphazamiseka kwesikhumba. I-DL-Panthenol isetyenziswa phantse kuzo zonke iintlobo zamalungiselelo ezinto zokuthambisa. I-DL-Panthenol ikhathalela iinwele, ulusu kunye neenzipho. Esikhumbeni, i-DL-Panthenol yindawo enzulu yokungena ngaphakathi. I-DL-Panthenol inokukhuthaza indawo ...
I-DL -Panthenol 75%
I-DL-Panthenol iipesenti ezingama-75 sisichumisi esikhulu, sinombala omdaka ngombala otyheli omthubi obonakalayo, enyibilikayo emanzini, utywala, ipropylene glycol. I-DL-Panthenol ikwabizwa ngokuba yiProvitamin B5, edlala indima ebalulekileyo kwimetabolism yomntu. I-Vitamin B5 inokubangela ukuphazamiseka kwesikhumba. I-DL-Panthenol isetyenziswa phantse kuzo zonke iintlobo zamalungiselelo ezinto zokuthambisa. I-DL-Panthenol ikhathalela iinwele, ulusu kunye neenzipho. Esikhumbeni, i-DL-Panthenol yindawo enzulu yokungena ngaphakathi. I-DL-Panthenol inokukhuthaza indawo ...
I-D-Panthenol sisiseko esine-viscous fluid esivela kwi-pantothenic acid kwaye yenziwe ngokukodwa ukuze isetyenziswe kwimixholo ephezulu. Iiparameter zobuchwephesha eziphambili: Ukuchongwa kwe-A kungqinelana nokuchongwa kwe-USP B kungqinelana nokuchongwa kwe-USP kungqinelana nokubonakala kwe-USP engenambala, iViscous kunye nokucaca kolwelo olucacileyo (Isiseko esingenamanzi) 98.0% ~ 102.0% Speci ...
D -Ipanthenol 75%
I-D-Panthenol iipesenti ezingama-75 sisiphumo se-pantothenic acid esine-viscous kwaye yenziwe ngokukodwa ukuze isetyenziswe kwimixholo. . Iiparameters zezoBuchule eziPhambili: Inkangeleko engenambala, eVisisayo kunye necacileyo yeZazisi zokuSabela okuPhendulayo (HPLC) 75.0 ~ 78.5% Amanzi (uKarl Fischer) angabi ngaphezulu kwe-0.1% Ujikelezo oluthile oluqinisekileyo + 29 ° ~ + 31.5 ° Am ...
I-D-Calcium Pantothenate yityuwa ye-calcium yevithamini B5 enyibilikiswa ngamanzi, efumaneka kuyo yonke indawo kwizityalo nakwizicubu zezilwanyana ezinempahla ye-antioxidant. IPentothenate licandelo leCoenzyme A kunye nenxalenye yesakhiwo seVitamin B2 I-Vitamin B5 yinto yokukhula kwaye ibalulekile kwimisebenzi eyahlukeneyo ye-metabolic, kubandakanya imetabolism yeecarbohydrate, iiproteni, kunye neeasidi ezinamafutha. Le vithamini ikwabandakanyeka kuhlanganiso lwe-cholesterol lipids, ii-neurotransmitters, iihomoni ze-steroid, kunye nehemoglo ...
I-Ascorbyl Tetraisopalmitate, ekwabizwa ngokuba yi-Tetrahexyldecy Ascorbate, yimolekyuli ethathwe kwivitamin C kunye ne-isopalmitic acid. Iziphumo zeemveliso ziyafana nezo ze-vitamin C, okona kubaluleke kakhulu kukuba iyakwazi ukusebenza njenge-antioxidant. I-Ascorbyl Tetraisopalmitate inciphisa ukuveliswa kweearhente ze-oxidizing, ezifaka igalelo ekonakaleni kweseli emva kokuvezwa yingozi ye-UV okanye yemichiza. Kwaye, ukubonakala kolusu ...
I-Biotin ekwabizwa ngokuba yi-D-Biotin, Vitamin H, Vitamin B7, imhlophe okanye iphantse yamhlophe, ikristaleine umgubo okanye iikristali ezingenambala, inyibilika emanzini, utywala, iyanyibilika kwi-acetone. Inyibilika kwizisombululo zeAlkali Hydroxides. Iiparameter zoBugcisa eziPhambili Inkangeleko emhlophe okanye emhlophe emhlophe yokuchongwa komgubo (A, B, C) Ungqinelana ne-USP Assay + 93 ° Resi ...
ICoenzyme Q10 iyabandakanyeka njengenxalenye yemitochondria kwimveliso yamaseli. Inefuthe le-antioxidant, lisetyenziswa kakhulu kwi-physiology, ikhemesti, izinto zokuthambisa kunye nokukhuselwa kwezempilo.Yityheli emthubi okanye ukukhanya emthubi yikristale yomgubo, ayinabumba, ayinancasa, inyibilika ngokulula kwi-chloroform, i-benzene kunye ne-carbon tetrachloride; inyibilika kwi-acetone, aether, petroleum ehter; inyibilika kancinci kwi-ethanol; engenakunyibilika emanzini okanye kwimethanol.Iya kubola ibe zizinto ezibomvu ekukhanyeni, kwi-stabl ...
I-Magnesium Ascorbyl Phosphate sisiphumo esizinze kakhulu sevithamini C (L-Ascorbic acid mono-dihydrogen phosphate magnesium salt) engathobisi iifomula ezinamanzi. Kwiimveliso zokhathalelo lolusu, iMagnesium Ascorbyl Phosphate isetyenziselwa ukukhusela nokulungisa i-UV, imveliso ye-collagen, Ukukhanya kwesikhumba kunye nokuqaqamba, kwaye njenge-anti -inflammatory. Ikwayinto enamandla ye-antioxidant.Iqwalaselwa njengeyona arhente mhlophe ingagungqisiyo eyenza ukuba iiseli zolusu zivelise i-melanin kunye nokukhanya ...
Isodium Ascorbyl Phosphate evela kwivithamini C, ivithamin C isekwe kwisayensi nakwitekhnoloji yale mihla yokwenza izinto ezingafunekiyo ezenziwe kusetyenziswa le mveliso, nokuba kungomlomo okanye kungene ulusu emzimbeni, inokucolwa ngokukhawuleza yi-phosphatase ukukhulula ivithamin C, ivithamin C idlala imisebenzi eyahlukileyo yomzimba kunye ne-biochemical.Sodium Phosphate Vitamin C Vitamin C inakho konke ukusebenza kwazo zombini. UVitamin C woyisa uvakalelo kukukhanya, ubushushu kunye ion zentsimbi, sh ...
I-Kojic Acid yaziwa ngokuba yi-5- hydroxyl -2- hydroxymethyl -1 kunye ne-4- piranone. I-asidi ye-tramperic acid yinaliti emhlophe okanye emthubi njengekristale; ngokulula inyibilika emanzini, utywala kunye ne-acetone, inyibilika kancinci kwi-ether, i-ethyl acetate, i-chloroform kunye ne-pyridine, engenakunyibilika kwi-benzene; ifomula yayo ye-molekyuli C6H6O4, ubunzima beMolekyuli 142.1, indawo yokunyibilika153 ～ 156 ℃. Iiparamitha zoBugcisa eziPhambili Inkangeleko emhlophe okanye icime ikristale emhlophe njenge ...